Ny 'Roma any Angletera' dia mety hahavery ny UNESCO lova manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Ny 'Roma any Angletera' dia mety hahavery ny UNESCO lova manerantany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Manintona mpizahatany lehibe any amin'ny 66.5 kilaometatra atsimo atsinanan'i Londres, Canterbury dia atahorana ho very ny hatsaran-tarehiny sy ny tantarany amin'ny alàlan'ny famelana ireo fivoarana mahatsiravina sy ivelany hivoatra ao anatiny, na mifanakaiky amin'ny votoatin'ny tantara ao an-tanàna, mbola voahidy ao anatiny boribory misy rindrina medieval.
Canterbury dia miatrika ny ahiana ho potika, hoy ny vondrona lova.
UNESCO dia mety hanaisotra ny toerana misy ny vakoka ananan'i Canterbury.
Ny fizahantany dia mitentina 700 tapitrisa dolara isan-taona amin'ny harinkarenan'i Canterbury.
SAVE Ny Lova Britanika, iray amin'ireo vondrona lova malaza any Angletera, dia namoaka tatitra androany fa mampitandrina fa ny tanàna UNESCO World Heritage city Canterbury dia iharan'ny famongorana tsy am-piheverana.
Toeran'ny fizahantany lehibe any 66.5 kilometatra atsimoatsinanan'i Londres, Cantorbéry atahorana ho very ny hatsaran-tarehiny sy ny tantarany amin'ny alàlan'ny famelana ireo fivoarana mahatsiravina sy ivelany hivoatra ao anatiny, na mifanila amin'ilay fotokevitra manan-tantara ao an-tanàna, izay mbola voahidy ao anatin'ny faritry ny rindrina medieval, hoy ny vondrona lova tamin'ny tatitra iray.
Ny fanjakan'i Canterbury dia manakaiky ny vonjy taitra nasionaly, hoy ihany izy.
Ny tanàna dia afaka manaraka an'i Liverpool izay nesorina tsy ho ela akory UNESCO Nampitandrina koa ny satan'ny Site Heritage World, Ptolemy Dean, filohan'ny Fikambanana Canterbury.
Ny fizahan-tany farany fizarana azo antoka dia mitentina 700 tapitrisa dolara amerikana isan-taona ho an'ny toekarenan'i Canterbury. Nahasarika mpizahatany 65 tapitrisa isan-taona ny tanàna talohan'ny areti-mandringana COVID-19.
Canterbury dia malaza noho ny katedraly manaitra azy, tranon'ny razana ao amin'ny Church of England, natsangana tamin'ny taona 597 AD, miaraka amin'ny trano ankehitriny hatramin'ny 1070.